HomeWararka CaalamkaDalka ugu Horeeyay ee Yurub oo Qasab ka dhigay Talaalka Corona
Austria waxay go’aansatay inay ku soo rogto tallaalka corona ee qasabka ah dhammaan dadka ka weyn da’da 18 jir. Golaha Shacbiga (Baarlamaanka) ayaa cod aqlabiyad ah shalay ku ansixiyay sharciga muranka dhaliyay, ka dib dood saacado qaatay.
Sharcigu wuxuu soo rogayaa ganaax culus qof kasta oo diida tallaalka, iyada oo aan la helin sabab caafimaad oo la ansixiyay. Sida uu sheegay TT.
“Sidan oo kale, waxaan uga fogaan karnaa xiritaanka bulshada mustaqbalka,” ayuu yiri wasiirka caafimaadka Austria Wolfgang Mückstein, isagoo carabka ku adkeeyay in aysan ahayn su’aal kaliya oo ah in laga hortago mutant-ga cusub “Omicron”.
Sharcigan ayaa dalka ka dhaliyay khilaaf baahsan. Codbixinta baarlamaanka ayaa ku soo beegantay mudaaharaadyo ka dhacay caasimadda Vienna. Si kastaba ha ahaatee, aqlabiyad siyaasadeed oo ballaaran oo baarlamaanka ah ayaa taageeray sharciga, oo ay ku ansixiyeen 137 cod, 33 ayaa diiday. Kaliya xisbiga garabka midig ee populist FPÖ ayaa kasoo horjeestay sharciga.
Ilaa Arbacadii, boqolkiiba 72 dadka Australiyaanka ah ayaa si buuxda loo tallaalay. Inta soo hartay waa in la tallaalaa ka hor Febraayo 4-deeda si aysan sharciga u jebin, laakiin booliisku waxay billaabi doonaan baaritaanno aan kala sooc lahayn bartamaha Maarso.